Ny Bokin’ i Helamàna
Tantaran’ ny Nefita. Ny adiny sy ny fifandirany ary ny fisaraham-bazany. Ary koa ny faminanian’ ny mpaminany masina maro, talohan’ ny fiavian’ i Kristy, araka ny rakitsoratr’ i Helamàna, izay zanakalahin’ i Helamàna, ary koa araka ny rakitsoratr’ ireo zanany lahy hatrany amin’ ny fiavian’ i Kristy. Ary maro koa tamin’ ny Lamanita no niova fo. Ny tantaran’ ny fiovany fo. Ny fitantarana ny fahamarinan’ ny Lamanita ary ny faharatsiana sy ny fahavetavetan’ ny Nefita hatrany amin’ ny fiavian’ i Kristy, araka ny rakitsoratr’ i Helamàna sy ny zanany lahy, izay antsoina hoe ny Bokin’ i Helamàna, sy ny sisa.
Tonga lohan’ ny mpitsara i Pahôràna faharoa ary novonoin’ i Kiskomena—Nipetraka teo amin’ ny toeram-pitsarana i Pakomenia—I Kôriantomira no nitarika ny miaramila Lamanita naka an’ i Zarahemlà, ary namono an’ i Pakomenia—Nandresy ny Lamanita ary naka indray an’ i Zarahemlà i Môrônihà, ary novonoina i Kôriantomira. Tokony ho 52–50 talohan’ i J.K.
Tonga lohan’ ny mpitsara i Helamàna, zanakalahin’ i Helamàna—Nitarika ny antokon’ i Kiskomena i Gadiantôna—Namono an’ i Kiskomena ny mpanompon’ i Helamàna, ary nilefa nankany an-tany foana ny tarik’ i Gadiantôna. Tokony ho 50–49 talohan’ i J.K.
Nifindra monina tany amin’ ny tany andafiavaratra ny Nefita maro—Nanorina trano tamin’ ny simenitra sy nitana rakitsoratra maro izy ireo—An’ alina no niova fo sy natao batisa—Nitarika ny olona hankamin’ ny famonjena ny tenin’ Andriamanitra—Nipetraka teo amin’ ny toeram-pitsarana i Nefia, zanakalahin’ i Helamàna. Tokony ho 49–39 talohan’ i J.K.
Nampitambatra ny heriny ny mpiendaka Nefita sy ny Lamanita ary naka ny tanin’ i Zarahemlà—Tonga ny faharesen’ ny Nefita noho ny faharatsiany—Nihemotra ny fiangonana, ary nanjary nalemy toy ny Lamanita ny vahoaka. Tokony ho 38–30 talohan’ i J.K.
Nanokana ny tenany ho amin’ ny fitoriana i Nefia sy i Lehia—Nitaona azy ireo ny anarany hampitaha ny fiainany amin’ ny an’ ny razany—Nanavotra ireo izay nibebaka i Kristy—Nahatonga ny olona maro hiova fo i Nefia sy i Lehia ary notanana am-ponja sy nohodidinin’ ny afo izy ireo—Nanaloka olona telonjato ny rahon’ ny haizina—Nihovitrovitra ny tany, ary nandidy ny olona hibebaka ny feo iray—Nitafasiry tamin’ ny anjely i Nefia sy i Lehia, ary nohodidin’ ny afo ny besinimaro. Tokony ho 30 talohan’ i J.K.
Nitory tamin’ ny Nefita mamohehatra ny Lamanita marina—Niroborobo ny vahoaka roa tonta nandritra ny fotoan’ ny fandriampahalemana sy ny fahafenoana—I Losifera, fototry ny ota, dia namoky ny fon’ ny olon-dratsy sy ny jirik’ i Gadiantôna ho amin’ ny famonoana sy ny faharatsiana—Nandray ny fitondrana ny governemanta Nefita ny jirika—Tokony ho 29–23 talohan’ i J.K.
Ny Faminanian’ i Nefia, Zanakalahin’ i Helamàna—Nandrahona ny vahoakan’ i Nefia Andriamanitra fa hovangiany ao amin’ ny fahatezerany izy ho famongorana azy tanteraka raha tsy mibebaka amin’ ny faharatsiany izy. Namely ny vahoakan’ i Nefia tamin’ ny areti-mandringana Andriamanitra; nibebaka sy nitodika Taminy izy. Naminany tamin’ ny Nefita i Samoela ilay Lamanita.
Mahafaoka ny toko faha-7 ka hatramin’ ny 16 manontolo.
Notsipahan’ ny tany avaratra i Nefia ary niverina tao Zarahemlà—Nivavaka teo amin’ ny tilikambon’ ny sahany izy ary avy eo dia niantso ny olona na hibebaka na ho faty. Tokony ho 23–21 talohan’ i J.K.
Mikatsaka ny hambosy ny olona hanohitra an’ i Nefia ny mpitsara lomorina—I Abrahama, i Mosesy, i Zenôsa, i Zenôka, i Ezia, i Isaia, i Jeremia, i Lehia sy i Nefia, dia nanambara ny amin’ i Kristy daholo—Nambaran’ i Nefia tamin’ ny fitaoman’ ny fanahy ny famonoana ny lohan’ ny mpitsara. Tokony ho 23–21 talohan’ i J.K.
Nahita ny lohan’ ny mpitsara maty teo amin’ ny toeram-pitsarana ny iraka—Naiditra am-ponja izy ireo ary nafahana tato aoriana—Tamin’ ny fitaoman’ ny fanahy no namantaran’ i Nefia an’ i Seantoma ho mpamono—Neken’ ny sasany ho toy ny mpaminany i Nefia. Tokony ho 23–21 talohan’ i J.K.
Nomen’ ny Tompo fahefana hifehy i Nefia—Nomem-pahefana izy hamatotra sy hamaha ety an-tany tahaka ny any an-danitra—Nandidy ny olona izy na hibebaka na ho faty—Nitondra azy avy tamin’ ny valalabemandry nankamin’ ny valalabemandry ny Fanahy. Tokony ho 21–20 talohan’ i J.K.
Noresen’ i Nefia lahatra ny Tompo mba hanolo ny adiny ho mosary—Maro ny olona maty—Nibebaka izy, ary nitalaho orana tamin’ ny Tompo i Nefia—Nandray fanambarana maro i Nefia sy i Lehia—Niorim-paka teo amin’ ny tany ny jirik’ i Gadiantôna. Tokony ho 20–6 talohan’ i J.K.
Tsy mahatombin-tsiraka sy adala ary mailaka amin’ ny fanaovan-dratsy ny olona—Nofaizin’ ny Tompo ny olony. Nampitahaina ny herin’ Andriamanitra sy ny mahatsinontsinona ny olona—Amin’ ny andron’ ny fitsarana, ny olona dia hahazo ny fiainana maharitra mandrakizay na ny fanamelohana maharitra mandrakizay. Tokony ho 6 talohan’ i J.K.
Ny faminanian’ i Samoela ilay Lamanita tamin’ ny Nefita.
Mahafaoka ny toko 13 ka hatramin’ ny 15 manontolo.
1 I Samoela ilay Lamanita dia naminany ny famongorana ny Nefita raha tsy mibebaka izy—Nozonina izy sy ny hareny—Nitsipaka sy nitora-bato ny mpaminany izy, notemerin’ ny devoly manodidina, ary nikatsaka ny fahasambarana tamin’ ny fanaovana heloka. Tokony ho 6 talohan’ i J.K.
Nolazain’ i Samoela mialoha ny fisian’ ny hazavana mandritra ny alina sy ny kintana vaovao amin’ ny fahaterahan’ i Kristy—Navotan’ i Kristy tamin’ ny fahafatesany ny nofo sy ny fahafatesam-panahy—Ny famantarana ny amin’ ny fahafatesany dia nahitana ny haizina hateloana, ny fitresahan’ ny vatolampy ary ny fisavorovoroana lehibe teo amin’ ny voary. Tokony ho 6 talohan’ i J.K.
Nofaizin’ ny Tompo ny Nefita satria notiaviny izy—Ny Lamanita niova fo dia niorina sy nifototra tao amin’ ny finoana—Ho feno famindram-po amin’ ny Lamanita ny Tompo amin’ ny andro farany. Tokony ho 6 talohan’ i J.K.
Ny Nefita izay nino an’ i Samoela dia nataon’ i Nefia batisa—I Samoela dia tsy hay novonoina tamin’ ny zanatsipìka sy ny vaton’ ny Nefita tsy mety mivalo—Nanamafy ny fony ny sasany, nahita anjely ny hafa—Nilaza ny tsy mpino fa tsy fahendrena ny mino an’ i Kristy sy ny fiaviany any Jerosalema. Tokony ho 6–1 talohan’ i J.K.